FIVORIAMBEN'NY VONINAHITRA HO AN'NY INVESTMENT ho an'i Sipra | 100% RATE FAHOMBIAZANA | AZO ATAO | VISA GOLDEN ho an'i Sipra, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola Sipra, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Sipra, fandaharana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Sipra, sekona
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra sy Visa Golden
● Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra amin'ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany
Best Agents ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra ary Mpisolovava an'ny Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra sy ny brokers ho an'ny trano sy trano fonenana fandaharana ao Sipra dia miasa miaraka amin'ny fiarovana ny mpanjifa.
Ny toeram-ponenan'ireo masoivohon'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia manome serivisy ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fandaharana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fandaharana fampiantranoana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fonenana faharoa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, toeram-ponenana roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena ary toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra. , Fonenana maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, Resident vetivety amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fonenana amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Sipra, fonenana amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Sipra, faharoa Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny toeram-ponenana ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny programa zom-pirenena zom-pirenena any Sipra, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny teti-bola any Sipra, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny teti-bola any Sipra, faharoa pasipaoro any Sipra, programa pasipaoro faharoa any Sipra , programa pasipaoro faharoa any Sipra, pasipaoro faharoa indroa any Sipra, toeram-ponenana ary pasipaoro faharoa any Sipra, pasipaoro diplomatika faharoa any Sipra, pasipaoro faharoa amin'ny fampiasam-bola any Sipra, pasipaoro zom-pirenena faharoa any Sipra, tetikady pasipaoro faharoa any Sipra, tetikady pasipaoro faharoa any Sipra , visa volamena any Sipra, visa volamena any Sipra, programa visa volamena any Sipra, programa visa volamena any Sipra, visa volamena faharoa any Sipra, programa visa volamena faharoa any Sipra, visa volamena roa any Sipra, zom-pirenena ary visa volamena any Sipra, toeram-ponenana ary visa volamena any Sipra, zom-pirenena visa volamena any Sipra, tetikasan'ny visa volamena any Sipra, drafitra visa volamena any Sipra.
"Vahaolana 1 fijanonana" ho an'ny toeram-ponenanao rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra miaraka amin'ny fanampiana fanampiny.
Fampiasam-bola farafahakeliny any Sipra ho fananana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola: 300,000 EUR (visa volamena)
Fampidirana Sipra sy toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
I Sipra dia mihamahazo vahana kokoa eo amin'ireo mpivarotra mandroso sy tambajotra fahitana amin'ny Internet. Nosy iray any atsinanan'ny ranomasina Mediterane, any Sipra dia tsy toerana fitsidihana fizahan-tany fotsiny, fa toerana tsara hananganana base ho an'ny mpahita fahitana.
Fanjakana eoropeanina, fanombanana ambany, firafitry ny fikambanana ifotony, tambajotram-pandrosoana ary fiara lehibe mifandraika amin'ny sisa tavela amin'i Eropa sy Moyen Orient, i Sipra dia tena manamarika boaty be dia be ho an'ny ankamaroan'ny mpandraharaha. Misy moron-dranomasina mahafinaritra be dia be manerana ny nosy, ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo sombin-tsarimihetsika cypriot voalohany amiko io. Nanomboka tamin'ny taona 2019, nanolotra amoron-dranomasina 49 misy volon-dranomasina i Sipra, ary maro amin'izy ireo no mety amin'ny seranan-dranomasina, ohatra, ny fanaovana ski an-tsambo, ny fitsangantsanganana ary ny fanaovana ski ambony rano.
Ankoatr'izay, any andrefan'ny nosy any amin'ny distrikan'i Paphos, dia matetika misy fivontosana iray any andrefana izay ilaina amin'ny fivezivezena. Misy ihany koa ny fisokafana mitsambikina miaraka amin'i Sipra izay manolotra toerana fandosirana tena ilaina, ohatra, ny lava-bato Amphorae sy ny vakivaky MS Zenobia. Satria manan-danja ho an'ny Vondrona eropeana i Sipra, dia miditra an-tsokosoko amin'ny fikambanan'ny tsena sy ny ladoany tokana ny firenena. Midika izany fa manome zana mitovy amin'izany ny nosy amin'ny firenena eropeana hafa.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny vola Cypriot ho Euro, misy varavarana misokatra bebe kokoa ho an'ny varotra ary fampidirina bebe kokoa amin'ny fananana vola. Ny fomba fiaina cypriot dia Mediteraneana be, ary ny toetr'andro koa! Nandritra ny taona iray manontolo, ny toetr'andro mandrehitra dia singa iray manintona iray hafa amin'ny nosy.
Sipra dia iray amin'ireo fahavaratra mafana indrindra sy ny ririnina ririnina any amin'ny Mediterane. Ny zavatra rehetra heverina, ny mari-pana isan-taona dia eo anelanelan'ny 25 ° C amin'ny antoandro ary 15 ° C amin'ny alina.
Mandritra ny faramparan'ny lohataona lohataona, indrindra ny volana Jolay sy Aogositra, dia mafana ny nosy! Miaraka amin'ny mari-pana amoron-dranomasina 30 ° C mandritra ny andro ary 23 ° C ny hariva. Tena lafo ve ny mipetraka any Sipra?
Tsy amin'ny toe-javatra rehetra.
Amin'ny ankapobeny, ny salan'isa vidin'ny entana any Sipra dia ambany dia ambany raha oharina amin'ny firenena eropeana hafa. Noho ny maha nosy sy ny takiana amin'ny fanafarana dia misy zavatra vitsivitsy izay lafo kokoa, ohatra, ny fiara. Noho izany, ity dia tokony isaina amin'ny fandanianao rehefa mieritreritra ny hifindra any Sipra.
Ny fandaniana ara-dalàna amin'ny fety ho an'ny roa ao amin'ny nosy dia hampihena anao manodidina ny € 25-30. Raha sanatria ianao mpankafy sakafo grika sy afovoany atsinanana dia hahita tavernas mahazatra marobe izay manome sakafo matanjaka amin'ny vidiny mirary.
Avy any Expatistan, i Nicosia sy Limassol no faritra an-tanàn-dehibe roa lafo vidy indrindra amin'ny nosy. Na eo aza izany dia asehon'ny valiny fa ny salan'isa vidin'ny entana ifotony ao Nicosia dia manodidina ny 28% ambany noho ny Stockholm.
Raha ny zavatra niainako dia Cypriots dia mahay ary miresaka anglisy mahazatra mahazatra. Rehefa mipetraka any Chypre aho dia manoro hevitra aho ny hifaneraserana amin'ireo mponina manodidina mba hihaona amin'ny fomba fiaina Sipra. Ny toeram-pialofana amin'ny hetra dia fantatra fa mamela ny teratany hanana fotoana handoavana ny fandaniam-bola miadana kokoa raha oharina amin'izay hataony any amin'ny fireneny eo an-toerana.
Ankoatr'izay, i Siprosy dia mety ho nahazo tombony manokana tamin'ny fifanoheran-kevitra tamin'ny firenena samihafa manoloana ny tsindry fanombanana ankapobeny.
Ny fanovana ho ivon-toerana ho an'ny orinasa sy ny kaonty dia ilain'ny Sipra hatrany, indrindra hatramin'ny nisarahan'ny firenena tamin'ny 1974. Miankina tanteraka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany ny firenena; na izany aza, ny firenena dia manome tosika fandaniana mahasarika ho an'ireo mpahita fahitana manerana an'izao tontolo izao.
Betsaka ny fanitsiana ny firafitry ny asan'ny Sipra mandritra ny fotoana maharitra. Na izany na tsy izany, mbola betsaka ny tombony azo amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny firenena.
Andininy fototra momba ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
300,000 EUR (visa volamena)
Fanamarinana voajanahary ('Citizenship') na fahazoan-dàlana maharitra hipetraka, miankina amin'ny drafitra,
Fotoana fanodinana ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Safidy fampiasam-bola ho an'ny Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Maninona no mandeha amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Manana toerana ara-jeografika lehibe i Sipra. Izy io no manana trano honenana mora vidy indrindra ao amin'ny Vondrona eropeana. Be loatra ny mety amin'ny fankatoavana eto amin'ny firenena. Aorian'ny fahatongavanao ho mponina any Sipra, hanana ny fotoana rehetra azonao araraotina amin'ny firenena ianao, anisan'izany ny fampianarana ambony. Sipra dia hiditra ao amin'ny faritr'i Schengen amin'ny ho avy akaiky indrindra, izay hanome ny fahafaha-mivezivezy sy monina manerana an'i Eropa. Ny fanatrehana ara-batana ao amin'ny firenena misy olona maharitra dia tsy ilaina. Ianao ihany no takiana amin'ny fitsidihana ny firenena mandritra ny fizotran'ny fangatahana.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fandaharam-ponenana any Sipra dia ampiharina amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana ihany koa.
Fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Sipra insite
Ny fotoana fanodinana programa dia 2 volana monja. Rehefa avy mividy trano any Sipra ianao dia tsy voatery mijanona ao amin'ilay firenena fotsiny fa mitsidika an'i Sipra isaky ny 2 taona.
Mba hahazoana trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola dia tokony hampiasa vola any Sipra ianao farafahakeliny 300,000 EUR. Ho fanampin'izay, ianao dia tokony hanao petra-bola amin'ny vola 30,000 EUR. Ankoatr'izay, angatahina aminao ny fampidiram-bola isan-taona avy any ivelany farafahakeliny EUR 30,000 isaky ny mpivady. Ankoatr'izay, EUR 5,000 ho an'ny ankizy tsirairay ary EUR 8,000 ho an'ny ray aman-dreny tsirairay.
Tsy maintsy tonga any Sipra indray mandeha ianao mba hanomezana ny angona biometrika takiana. Azonao atao ny mitsidika ny firenena mandritra ny fizotran'ny fangatahana na aorian'ny fankatoavana.
Ny mpangataka dia takiana amin'ny fividianana fananana vaovao farafahakeliny 300,000 EUR any Sipra. Ny fifanarahana amin'ny varotra sy ny porofo fa namindra farafahakeliny EUR 200,000 amin'ny vidin'ny fananana ianao dia tokony hatolotra miaraka amin'ny fangatahana. Azo atao ny mividy ny trano amin'ny orinasa. Na izany aza, ny mpangataka na ny vadiny dia tokony ho tompon'andraikitra tokana amin'ny orinasa.
Ankoatr'izay, ny mpangataka dia tokony hametraka vola amin'ny banky EUR 30,000 Sipra. Ny tahiry dia tokony avela ao amin'ny banky mandritra ny 3 taona. Rehefa afaka 3 taona. haverina amin'ny olona ilay vola rehetra.
Ny saram-panjakana amin'ny fandefasana ny fahazoan-dàlana dia 500 € isaky ny mpivady. Misy sarany fanampiny 70 EUR isaky ny miankina miankina. Misy sarany EUR 50 isaky ny olona amin'ny angona biometrika.
Ny ekipan'i ponenana avy amin'ny Agents Investment for Sipra ary ponenana avy amin'ny Investment mpisolovava ho an'ny Sipra manome mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo any Sipra miaraka amin'ny fanohanana ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra sy ny fahafaha-mifindra monina amin'ny fifindra-monina hafa, any amin'ny firenena 37.
Manome mora vidy izahay Fonenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra, amin'ny alàlan'ny zakanay takatry orinasan-dalàna momba ny fampiasam-bola sy ny fifindra-monina ho an'i Sipra, mpisolovava momba ny fifindra-monina mora vidy ho an'i Sipra, toerana onenan'ireo mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Sipra, toerana onenan'ireo mpisolovava mpamatsy vola ho an'i Sipra ary orinasa mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina ho an'i Sipra.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra ka hatramin'ny firenena 37.
Fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola avy any Sipra.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra amin'ny alàlan'ny trano sy tany
Manome fanampiana ho an'ny fampiasam-bola amin'ny trano any Sipra izahay miaraka amin'ny fomba fijery fa tokony hahazo tombony tsara amin'ny mpanjifa any Sipra ny mpanjifa, isaky ny te-hiala amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra izy ireo. Manana fifandraisana amina mpandrindra trano sy trano vitsivitsy faran'izay tsara eto Sipra izahay izay manana rakitsoratra tsara ary ny fananany dia any amin'ny toerana tsara any Sipra, mahazo valiny tsara indrindra.
Tokony ho fantatra - Resaka fampiasam-bola any Sipra
Ny toeram-ponenan'i Lawyer Investment ho an'i Sipra dia hanome fanampiana amin'ny antsipiriany momba ny fonenanao mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra. Ny serivisy mahazatra momba ny trano fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra dia misy:
Miorina amin'ny fahazotoana voalohany izahay, mba hanomanana tatitra alohan'ny hanolorana ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra amin'ireo mpanjifa hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Sipra ary hampihenana ny mety ho fandavana.
Mba hahafahantsika miroso amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Sipra dia mila kopian'ny pasipaoro ampiasain'ny mpianakavy sy fianakaviana izahay.
Fandikana sy fanodinana ny antontan-taratasy Residence amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Sipra. Ireo mpisolovava manokanay momba ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra sy ny visa volamena dia hanampy amin'ny famenoana endrika sy antontan-taratasy.
Raha vantany vao vonona ny antontan-taratasinao sy ny fianakavianao momba ny Resident amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Sipra, dia hofenoinay tompon'andraikitra tompon'andraikitra any Sipra.
Vantany vao ekena ny fangatahanao hitoetra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, dia mizara ny vaovao tsara aminao izahay ary manomboka miomana amin'ny fanohanana hafa.
Tsy manohana na manome Residence amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola any Sipra izahay ho an'ireo olona voalaza etsy ambany na orinasa any Sipra:
ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra dia tsy atolotra ho an'ny Mpivarotra na mpaninjara fitaovam-piadiana sy bala na avy any Sipra.
ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Sipra dia tsy atolotra amin'ny fanaraha-maso ara-teknika any Sipra na fitsikilovana indostrialy ny programa fampiasam-bola ao na avy any Sipra.
ponenana amin'ny alàlan'ny fakan-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia tsy atolotra ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna na heloka bevava any Sipra.
ponenana amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola ho an'ny Sipra dia tsy natao ho an'ny olona mifandraika amin'ny Genetic material any Sipra.
ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra tsy natao ho an'ireo orinasa miady amin'ny fitaovam-piadiana biolojika na nokleary mampidi-doza na mampidi-doza any Sipra.
ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Ny fanampiana an'i Sipra dia tsy misy ho an'ny olona any Sipra mifandraika amin'ny varotra, fitehirizana any Sipra, na fitaterana taova olombelona.
ponenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny Sipra dia tsy natao ho an'ny maso ivoho tsy ara-dalàna.
ponenana serivisy fandaharana ho an'ny Sipra dia tsy natao ho an'ny antokom-pinoana sy ny fikambanana mpanao asa soa any Sipra.
ponenana amin'ny serivisy fampiasam-bola ao Sipra dia tsy omena ny olona manao sary vetaveta any Sipra.
Ny fonenanay mpisolovava any Sipra aza manohana ny fandraharahana amin'ny fivarotana zava-mahadomelina any Sipra.
“Fanamarihana lehibe : MM Solutions INC dia mitaky fitandremana araka ny antonony mba hametrahana mialoha ireo antontan-taratasy AML ho an'ny mpanjifa ho an'i Sipra sy ny KYC saingy tsy ekenay ny tompon'andraikitra amin'ny fanilihana rehetra ataon'ny manampahefana ao Sipra ho fankatoavana ny fangatahana ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra sy any amin'ny firenena hafa, miampy fanampiana maro hafa.
Manome fonenana tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny fampiasam-bola any Sipra ho an'ny famatsiam-bola, ny fifindra-monina ary ny fananganana trano any Sipra.
Manampy anao amin'ny alàlan'ny traikefa fampiasam-bola sy ny takian'ny lalàna any Sipra, manamboatra vahaolana tsara indrindra izahay.
Ny toeram-ponenanay amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra dia manome ny vidiny mora indrindra, miaraka amin'ny taha mahomby azo trandrahana indrindra any Chypre.
Nandia traikefa an-taonany maro izahay ho an'ny trano fonenana roa any Sipra manohana ny mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo ho any Sipra.
Fonenana efa za-draharaha avy amin'ireo mpisolovava mpamatsy vola ho an'i Sipra sy ireo mpiasan'ny lalàna any Sipra izay manome fanohanana ny mpanjifa.
Alohan'ny hipetrahanao ho any Sipra ary aorian'ny fankatoavana, ny mpikambana ao amin'ny ekipa zokinay dia ho eo eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha na fanohanana manokana an'i Sipra
Manana traikefa iraisam-pirenena amin'ny Residence izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Sipra, manampy ny mpanjifa eran'izao tontolo izao amin'ny serivisy tsara indrindra.
Raha sanatria, tsy nahomby ny toeram-ponenanao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, misy firenena 36 mbola tompoinay, vonona miaraka amin'ny drafitra B.
Kajy ny vidin'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra
Mba hikajiana ny vidin'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia fenoy ny antsipiriany rehetra ao anatin'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana sy ny taonany. Noho ny fahamaroan'ny mpanjifa any Sipra, afaka manome serivisy tsara kokoa izahay amin'ny vidiny mirary. Ny kajy dia misy, ny vidiny ho an'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Sipra sy ny fiampangana hafa.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra sy serivisy hafa
Ankoatry ny Residence amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena momba ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia manome orinasa, serivisy IT sy HR koa any Sipra izahay, izay tsy hitanao eo ambanin'ny elo iray nomen'ny mpanolontsaina hafa ho an'i Sipra izay nahatonga anay ho fivarotana tokana ho an'i Sipra sy firenena 106.
Manohana ny lalan'ny mpanjifanay mihoatra ny toeram-ponenana izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra miaraka amin'ny fanampian'ny mpisolovava anay, mpanolo-tsaina anay ary mpamatsy vola any Sipra sy iraisam-pirenena.
Aorian'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho Sipra raha mikasa ny manomboka orinasa amin'ny fividianana orinasa misy any Sipra ho an'ny fanombohana eo noho eo any Sipra.
Aorian'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, manangana orinasa ao Sipra.
Mpisolovava ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Manome Residence ara-dalàna amin'ny vahaolana Investment ho an'i Sipra izahay ary zava-dehibe ny fahombiazan'ny mpanjifanay, ho an'i Sipra, mpitarika izahay, ny orinasanay ho an'i Sipra dia manana mpiasan'ny fifindra-monina tsara indrindra any Sipra koa, manana ny lazany izahay amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsara indrindra ho an'i Sipra miaraka amin'ny vahaolana mazava momba ny famatsiam-bola ho an'ny olona any Chypre sy ny fianakaviany. Ny toeram-ponenanay ekipa mpamatsy vola ho an'i Sipra dia manome vahaolana voavolavola ho an'ny fahombiazan'ny mpanjifa.
Ny fahefan'ny mpisolovava an'i Sipra dia takiana amin'ny hetsika ara-dalàna ho anao amin'ny alàlan'ny Resident avy amin'ny mpisolovava mpamatsy vola any Sipra. Raha any Sipra ianao na mikasa ny hitsidika an'i Sipra, azonay atao ny mahazo etoana ny fahefanao mpisolovava.
Fanontaniana napetraka matetika - Fonenan'ny fampiasam-bola any Sipra
Inona ny fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra?
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra dia 300,000 EUR (visa volamena).
Manome fanampiana ara-dalàna an'i Sipra ho an'ny Resident amin'ny fampiasam-bola ve ianao?
Eny, ny mpisolovava anay any Sipra sy ireo masoivoho any Sipra dia manome fanohanana ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra.
Mahalasa vola ve ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra?
Ny vidin'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra ary ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fitakiana tahiry fampiasam-bola ho an'i Sipra dia ho an'ny olona manankarena avo lenta, ny saram-pakan-kevitra momba ny Resident by Investment to Siprus ihany no omenay vola, koa manome vahaolana hafa momba ny Residence amin'ny vahaolana Investment.
Iza amin'ireo mponina no afaka mangataka Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra na visa ho an'ny mpampiasa vola any Sipra?
Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola dia azo ampiasain'ny olom-pirenena amin'ny firenena rehetra saingy ohatra vitsy ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Azia, ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra avy any Afrika, ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra avy any Eropa, ny trano fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Amerika atsimo, Fandraisana an-tanana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Malezia, Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Bangladesh, Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Indonezia, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra avy any Sri Lanka, ny trano fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Nepal, ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any India sy ny toeram-ponenana tamin'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra avy any UAE.
Fonenana matihanina amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana ho an'ny Sipra
Mangataha consultation maimaimpoana ho an'ny toeram-ponenanao amin'ny Investment to Sipra
Fepetra manan-danja amin'ny Resident by Investment for Sipra